I-EACHINLED, esekwe kwi-2006, izinikele ekubeni ngumboneleli ohamba phambili kunye nohlonitshwayo wehlabathi kwiimveliso kunye neenkonzo zokubonwa komsindo, iminyhadala yesikrini esikhulu kunye nemithombo yeendaba yentengiso. I-EACHINLED yinkampani ekumgangatho ophakamileyo yobuchwephesha, eneshishini elibandakanya ukuboniswa kwe-LED yangaphakathi, izikrini zangaphandle zokuqeshisa i-LED, iipaneli ze-LED ezingashukumiyo ngaphakathi, Iibhodi zezaziso zentengiso ze-LED zangaphandle kunye ne-pixel ye-HD iindonga zevidiyo ze-LED, njl.
Okwangoku, ngaphezulu kwe-300 yabantu baqeshwe kwikomkhulu lenkampani, kwaye ngaphezulu kweefektri ze-4 zimiselwe ngaphakathi. Intengiso ehlanganisiweyo kunye nasemva kwentengiso yenkonzo iyasekwa kwihlabathi liphela eya kuthi ibonelele abathengi ngezisombululo, uqeqesho lwetekhnoloji kunye nenkxaso ekhethekileyo.
I-EACHINLED ibambe isikhundla esiphambili kwishishini layo eliphambili lokuvelisa isikrini se-LED, esinokuthi sinike uluhlu olubanzi lwangaphakathi, ngaphandle, nakwisikrini se-LED esiqeshisayo nge-pixel ukusuka kwi-P1.6-P31.25. Zisetyenziswa ngokubanzi kwimisitho yomtshato, iminyhadala yentsebenziswano, igala, iminyhadala, iikhonsathi, imiboniso, imidlalo, iinkomfa, umboniso weemoto, imithombo yeendaba zentengiso kunye nokucwangciswa komsitho, njl.
U-EACHINLED uya kuqhubeka nokugcina iinzame zokuqinisa isikhundla sakhe njengemveliso, itekhnoloji kunye nentengiso. U-EACHINLED uhlala enegalelo kwimizamo yethu yokunceda abathengi bethu baphucule ukubonwa kwaye bazalisekise uxanduva lwentlalo.